Imizi elahliwe, uhambo oludlula kuzilungiselelo zesipoki | Izindaba Zokuhamba
Luis Martinez | | Amadolobha, Iziqondiso
I-Las amadolobha alahliwe Empeleni, akuyona indawo yamaholide ekhethwe kakhulu kunazo zonke. Yizindawo okwathi, ngasizathu simbe, zashiywa ngabahlali bazo futhi akekho noyedwa owake wabuyela kuzo. Kepha namuhla izakhiwo zalo nezinsiza zalo zisaphila ekubolile okubanikeza ukubukeka kwesipoki.
Una inhlekelele yenuzi, the ngemuva kwempi noma i Ukuqedwa kwemithombo yemvelo okwaqala ukwakhiwa kwayo, ngezinye zezizathu ezenze lezi zindawo zashiywa zingenamuntu. Njengoba ukuvakasha kwakho kuyindlela ehlukile yokwenza ezokuvakasha, sizokutshela ngamanye amadolobha aziwa kakhulu ashiyiwe emhlabeni.
1 Amadolobha alahliwe, izibuko zesizungu
1.1 1.- Pripyat, imiphumela yeChernobyl
1.2 2.- Oradour-sur-Glane, ufakazi othule wempi
1.3 3.- Bodie, isifiso sokuceba
1.4 4.- Gunkanjima, i- «Battleship Island» phakathi kwamadolobha alahliwe
1.5 5.- IPyramiden, esinye isibonelo semizi eshiyiwe ngenxa yezizathu zomnotho
1.6 6.- Bhangarh, isiqalekiso somkhulu
1.7 7.- IHerculaneum, echithwe yiVesuvius
1.8 8. - ICraco, idolobha eliyizipoki esiqongweni se-promontory
1.9 9. - IKayaköy, idolobha elilahliwe laphenduka indawo yokugcina amagugu
1.10 10.- Belchite, isisulu sempi ye-Ebro
Amadolobha alahliwe, izibuko zesizungu
Sizoqala ukuvakasha kwethu okwehlukile Ukraine ukuyiqeda España. Endleleni, sizovakashela EFrance, Japan noma iqhwa ENorway. Ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale uhambo lwethu.
1.- Pripyat, imiphumela yeChernobyl
Leli dolobha lase-Ukraine lalakhelwe ukuhlalisa abasebenzi base Isiteshi samandla enuzi saseChernobyl, ngokudabukisayo idume ngengozi yango-1986. Kusukela lapho, iye yahlala ingahlalwa muntu ngenxa yokwesaba ukuthi imisebe ye-radioactivity. Kepha izindlu nezindawo zabo kusamile kukhombisa ukuwohloka okubukeka kusikhumbuza ukuthi amandla enuzi akuwona umdlalo.
Idolobha elilahliwe lasePripyat
2.- Oradour-sur-Glane, ufakazi othule wempi
Ngo-1944, amasosha aseJalimane enza ukubulawa kwabantu kuleli dolobha laseFrance. Babulala abantu abangu-642, abesilisa, abesifazane nezingane. Ngemuva kwempi, amaFrance akha idolobha elisha eduze kwaleli elidala, alishiya njengobufakazi obuphilayo bobuqaba. Njengoba sizobona, kwenzeka okufanayo eSpain ngemuva kwe- Impi yezikhali.
3.- Bodie, isifiso sokuceba
Kubekwe ngaphakathi California, leli dolobha lingelinye lamaningi akhiwa ukunikeza indawo yokukhosela kulabo abafika behehwa yi rush segolide lokho kudalulwe ekupheleni kwekhulu le-20 kule ndawo. Esikhathini esifushane, yakhula isuka kubantu abangu-10 iye kwabayi-000 XNUMX futhi yakhiqiza cishe isigamu sesigidi samaRandi ngenyanga kule nsimbi eyigugu. Kodwa-ke, sekuvele ngekhulu lama-XNUMX lawa futhi, kusukela lapho, liye lahlala lilahliwe.
4.- Gunkanjima, i- «Battleship Island» phakathi kwamadolobha alahliwe
Leli dolobha laseJapan lithola igama elinjalo ngoba liyisiqeshana somhlaba phakathi nolwandle lapho kungekho muntu obengacabanga ukuhlala khona. Ngaphezu kwalokho, izivunguvungu kule ndawo zivamile, ngakho-ke zazizungezwe izindonga ezinkulu ukuvimbela umonakalo.
Kodwa-ke, ibinomcebo: amalahle. Ukuxhaphaza imayini yakhe, abasebenzi nemindeni yabo bathathwa futhi kwakhiwa idolobha esiqhingini. Kufanele ukuthi kwakuyi-claustrophobic, ngoba ingamakhulu amane kuphela wamaphesenti ayikhulu namakhulu amahlanu amamitha ubude. Leli dolobha lasala lingahlalwa muntu ngo-1974 ngesikhathi kuvalwa imayini. Noma kunjalo, lokhu kunjalo Amagugu Emhlaba.
5.- IPyramiden, esinye isibonelo semizi eshiyiwe ngenxa yezizathu zomnotho
Njengalesi esedlule, idolobha laseNorway iPyramiden lakhiwa ukuze kuhlaliswe abasebenzi bezimayini zamalahle nemindeni yabo. Ngasekuqaleni kuka-1927, idolobha lathengiselwa abaseSoviet abalethe izakhamizi zabo ukuzosebenza esikhungweni sezimboni. Bafika lapho bahlala khona cishe abantu abayinkulungwane kuze kwavalwa imayini ngo-1998 okwenza ukuthi wonke umuntu ahambe.
6.- Bhangarh, isiqalekiso somkhulu
Lakhiwe ngekhulu le-XNUMX, leli dolobha lase India waphila isikhathi sobukhazikhazi ngaphansi kokubusa kukaMaharaja wodumo I-Bahgwant Das, owayalela ukwakhiwa kwezigodlo ezibabazekayo. Kepha, kulandela inganekwane, umkhulu othile ophikisana nalo mandla wenza isiqalekiso edolobheni.
Ngokwenkolelo, uhlobo oluthile lwe inhlekelele yemvelo kwenza abantu bahamba. Kodwa-ke, okwaziwa ngokuqiniseka ukuthi yanqotshwa ngo-1720, yawela ekuweni ize ekugcineni ishiywe yizakhamizi zayo.
7.- IHerculaneum, echithwe yiVesuvius
Idolobha elilahliwe iHerculaneum eningizimu Italia, ingenye yezidume kakhulu emhlabeni. Ukuqhuma kwentaba-mlilo IVesuvius ngo-79 AD wenza ukuthi abasindile abambalwa bashiye. Yize, empeleni, iningi lezakhamizi zalo zafela lapho.
Kusukela lapho, ayikaze iphinde ihlale futhi. Futhi lokhu kusetshenzelwe ukuze izivakashi zamanje zikwazi ukubona, cishe ngokuphelele, ukuthi bekuyini i- impilo yansuku zonke kusuka edolobheni laseLatin eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili edlule.
8. - ICraco, idolobha eliyizipoki esiqongweni se-promontory
Siyalandela Italia ukukubonisa elinye idolobha elilahliwe lelo, ekubukekeni kwalo eliyincithakalo, linezela iqiniso lokuthi lisendaweni ephakeme lapho kubonakala sengathi lenza izilinganiso ezingenakwenzeka. Kuhlelo Iminyaka ephakathi Kwakuyidolobha elichumayo elihlala cishe abantu abayizinkulungwane ezine, elinamakhosi ezigodlo ngisho neyunivesithi. Izakhamizi zayo zokugcina zayishiya ngo-1922 futhi manje izakhiwo zayo ezilahliwe zisibuka zisuka phezulu ngokungangabazeki i-aura yemfihlakalo.
9. - IKayaköy, idolobha elilahliwe laphenduka indawo yokugcina amagugu
Yaziwa nangokuthi Livissi, leli dolobha lesipoki litholakala ngamakhilomitha ayisishiyagalombili ukusuka eFethiye, eningizimu-ntshonalanga ye Turkey. Yahlala isikhathi sayo sobukhazikhazi ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX, lapho yayinabantu abangaba yizinkulungwane eziyisithupha.
Idolobha elilahliwe laseKayaköy
Kodwa-ke, ngemuva kwempi phakathi kwamaTurkey namaGrikhi, yashiywa ngo-1922. Njengamanje, isebenza njenge- Umnyuziyamu ongaphandle, enezindawo zokuhlala zayo ezinamasiko amaGrikhi namakhulu. Abanye baze babuyiselwa.
10.- Belchite, isisulu sempi ye-Ebro
Indawo Zaragoza de Belchite kwakuyidolobha elichumayo ngaphambi kweMpi Yombango. Kodwa-ke, ngesikhathi sempi kwaba yindawo yezimpi ezimbi kakhulu ezifanayo: leyo ye-Ebro.
Ngemuva kwayo, yacekelwa phansi ngokuphelele futhi kwakhiwa idolobha elisha, kwasala elidala njengobufakazi buthule ebunzimeni bempi. Akuyona ukuphela kwedolobha lolu hlobo ongabona ngalo eSpain. Futhi badume kakhulu Brunete, esifundazweni saseMadrid, futhi ICorbera de Ebro, eTarragona.
Sengiphetha, sikukhombise amanye amadolobha aziwayo ashiyiwe emhlabeni. Noma kunjalo, kunezinye eziningi. Isibonelo, ucingo Idolobha 404, eyayingenalo ngisho negama ngoba yakhiwa maphakathi nogwadule lwaseGobi nguHulumeni waseChina ukuhlalisa abasebenzi ababezohlola ngamabhomu e-athomu. NOMA I-Saint Elmo, esinye isisulu sokuqhutshwa kwegolide laseNyakatho Melika, futhi I-Epecuén, idolobhana elidala lezivakashi lase-Argentina. Kuningi kakhulu okuthi, uma ufuna ukwazi eyodwa, mhlawumbe ungayithola esifundeni sakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » Imizi elahliwe
Iziqhingi ezinhle kakhulu eGrisi
Izindawo zokuhlala ezihamba phambili ezi-5 eCatalonia